मुलुकमा संयोजन मास्को वरिपरि: शुरुवात चरणमा, को को पूरा
मास्को वरिपरि मुलुकमा को रूसी संघ को इतिहास गर्न कुञ्जीले XIV शताब्दीको पहिलो वर्ष मा सुरु र XV-xvi शताब्दीयौंदेखि को पालो मा समाप्त भयो। यो अवधिमा पुरानो feudal आदेश र समयमा त्यहाँ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य नष्ट थिए थियो।
एउटा सानो राजकूमारद्घारा शासित राज्य को केन्द्र
लामो समय को लागि मास्को रूस को उत्तर-पूर्वी मा व्लादिमीर-Suzdal मा अदृश्य गढ थियो। यो सानो शहर कुनै फरक धन र राजनीतिक महत्त्व छ। आफ्नै राजकुमार 1263 मा त्यहाँ देखियो। प्रसिद्ध Aleksandra Nevskogo छोरा - तिनीहरूले Daniil Aleksandrovich भयो। राजकुमार कान्छो छोराको रूपमा उहाँले poorest र सानो उत्तराधिकार थियो।
केही समयअघि रूस तातार-Mongol आक्रमण बाँचे। शत्रु सेना देश सुनौलो गिरोह गर्न आदर भुक्तानी नष्ट गरे। खान व्लादिमीर शहरमा शासकको वरिष्ठ राजकुमार स्वीकारे। आफ्ना सबै नातेदार Rurik, एक उत्तराधिकार आयोजित गर्ने, उसलाई आज्ञा पालन गर्न भएको थियो। एकै समयमा व्लादिमीर सिंहासन विधिपूर्वक मा लेबल खान बित्यो। उत्तराधिकार छोरा आफ्नो बुबाको शीर्षक पायो गर्दा विशिष्ट मध्ययुगीन राजतन्त्र, सिद्धान्त पूरा गर्न सकेन।
सकारात्मक शुरुवात रूपमा, भूमि मास्को वरिपरि समेकन यो भ्रम अन्त राखे, तर Muscovite अगुवाहरू कमजोर थिए र महत्वपूर्ण स्रोतहरू छैन सम्म, तिनीहरूले अन्य प्रभावशाली शासकहरूले सन्तुलनमा थियो। दानियल एक वा अन्य पुराना भाइहरूले (अन्द्रियास र दिमित्री) व्लादिमीर को सिंहासन लागि लडेका गर्ने समर्थित।
पहिलो मास्को राजनीतिक सफलताको खुसी संयोग द्वारा भयो छ। 1302 मा, त्यो अपुताली भान्जा Daniila इवान Dmitrievich, Pereslavl-Zaleski को राजकुमार को शीर्षक जन्माई मरेका। त्यसैले सानो feudal उपहार नजिकैको शहर थियो र एक मध्यम प्रभुहरूका मा गरियो। यो मास्को वरिपरि रूसी मुलुकमा को एकीकरण को शुरुवात थियो। तथापि, दानियल समय आफ्नो नयाँ स्थिति प्रयोग गर्न छैन। मास्को पहिलो feudal राजकुमार 1304 मा मृत्यु भयो।
व्लादिमीर लागि संघर्ष
पिताको स्थान 1303-1325 GG मा शासन गर्ने Yuriy Daniilovich, लगियो। उहाँले पहिलो जेल मा सानो छिमेकी उत्तराधिकार मालिक राख्दै, Mozhaisk को राजकूमारद्घारा शासित राज्य साथ दिए। Tver - त्यसैले मास्को उत्तर-पूर्वी रूस मा सबै भन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति भएको तर्क सुरु गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदम बनाएको छ। 1305 मा, उनको राजकुमार माइकल व्लादिमीर सिंहासन मा खान सर्टकट प्राप्त।
यो मास्को को धनी र ठूलो विरोधीको पिट्न कुनै मौका थियो कि देखिन्थ्यो। तर, दुविधा रूसी इतिहासको यस घडीमा सबै हतियार को शक्ति द्वारा हल गर्न भन्ने तथ्यलाई थियो। मास्को वरिपरि संयोजन मुलुकमा पनि धूर्त र Tatars जस्तै यसको शासक को कौशल गर्न ठाउँ धन्यवाद लिए।
गिरोह राजकुमार व्लादिमीर, अधिक भुक्तानी गर्न मौका थियो जो दिनुभयो। Tver को वित्तीय स्थिति मास्को भन्दा markedly राम्रो थियो। तर, Khans र अर्को नियमले निर्देशित। यो एक "भाग र विजयी" को रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन। एक राजकूमारद्घारा शासित राज्य लाभ, Tatars उहाँलाई धेरै भाग्य पनि शक्तिशाली बन्ने थियो भने, baskaks कृपा रिस बदलिएको सकिएन दिन छैन खोजे।
Tver विरुद्ध मास्को
यस कूटनीतिक कील देखि जडना मा 1305 मा माइकल खोने पछि, यूरी शान्त भएन। उसले गृहयुद्ध छोडिनुअघि, र त्यसपछि, त्यो केही नेतृत्व गर्न आए, शत्रु गरेको प्रतिष्ठा मा प्रहार गर्ने मौका लागि प्रतीक्षा गर्न थाले। यस्तो सम्भावना केही वर्ष आउन लामो छ। 1313 मा खान Tokhta मृत्यु, र आफ्नो स्थान उज़्बेक लगियो। माइकल को गिरोह जान र महान् लेबल को पुष्टि प्राप्त थियो। तथापि, यूरी उहाँलाई अगाडि।
उज़्बेक मा एक पटक आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको अघि, मास्को को राजकुमार नयाँ खान को भरोसा र अनुमोदन प्राप्त गर्न सबै गरे। यो गर्न, यूरी को तातार शासक Konchak को बहिनी विवाह, Orthodoxy रूपान्तरित र नाम Agafia बप्तिस्मा प्राप्त। साथै, मुख्य विरोधी माइकल नोभगोरोड गणतन्त्र एउटा सम्बन्ध निष्कर्षमा पुग्न गर्न व्यवस्थित। को गाउँलेहरू जसको मुलुकमा आफ्नो सीमाना थिए Tver, को शक्तिशाली राजकुमार डराएका थिए।
विवाह, यूरी घर गए। उहाँले एक तातार nobleman Kavgady सँगसँगै थियो। माइकल, यो गिरोह अलग शिविरमा उभिए भन्ने तथ्यलाई फाइदा लिइरहेको, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको आक्रमण। मास्को को राजकुमार फेरि पराजित र संसारको बिन्ती गरे थियो। विरोधीहरूले अदालत गर्न खान जान सहमत भए। माइकल को यो बिन्दुमा बादल thicken गर्न थाले। विजय, उहाँले Konchak कब्जा। यो Tver यूरी शिविरमा पति को राजकुमार मा स्थित छ र अस्पष्ट कारण उज़्बेक को बहिनी मृत्यु भयो।
शोकमा को द्वन्द्वमा एक मोड बने। यूरी शान्तपूर्वक घटनाको लिए। उहाँले आफ्नो आँखा Konchakov executioner मा माइकल राख्दै, यस Uzbeks फर्के। Kavgady, वा bribed, या बस माइकल रुचि थिएन, र उहाँलाई बदनाम। चाँडै Tver राजकुमार को खान गरेको अदालत मा आइपुगे। उहाँले ट्याग खोसिएर नाङ्गै थियो र brutally कार्यान्वयन। शासक व्लादिमीर शीर्षक यूरी पास। मास्को वरिपरि रूसी मुलुकमा को एकीकरण को शुरुवात समाप्त, र अब मास्को शासकहरूले आफ्नो हात मा प्राप्त शक्ति राख्न आवश्यक थियो।
1325 मा Yuriy Daniilovich फेरि आफ्नो बुबाको मृत्यु बदला लिन, उहाँले Tver, दिमित्री काला आँखाहरु को माइकल छोरा मृत्यु ह्याक थियो जहाँ गिरोह, आए। मास्को पावर मृतक इवान कलिता को भाइ द्वारा सफल भयो। उहाँले कमाउन र पैसा राख्न आफ्नो क्षमता को लागि जानिन्छ थियो। यसको पूर्ववर्ती नभई cautiously कार्य र शत्रुहरू को धूर्त भन्दा बढी धूर्त पराजित गर्न नयाँ शासक।
यूरी उज़्बेक को मृत्यु पछि, एक सिद्ध रणनीति प्रयोग गरेर उहाँले castling बिताए। मुख्य रूसी राजकूमारद्घारा शासित राज्य उहाँले नयाँ शासकहरू Tveri Aleksandru Mihaylovichu दिनुभयो। यो इवान Danilovich केही संग बाँकी थियो, तर आफ्ना समकालीनहरूको मा एक यस्तो छाप भ्रामक हुन बाहिर गरिएका देखिन्थ्यो। झगडा Tver समाप्त भएको छैन, यो केवल सुरुवात थियो। मास्को वरिपरि संयोजन मुलुकमा इतिहास को एक तेज पालो पछि जारी राखे।
1327 मा, Tver स्वभाविक विरोधी तातार विद्रोह बाहिर भङ्ग। शहर वसोवास, को अत्यधिक levies अपरिचित थकित कर उठाउनेहरू मारे। अलेक्जेन्डर यो प्रदर्शन व्यवस्थित थिएन, तथापि, उहाँलाई सामेल र अन्ततः आफ्ना प्रजालाई को विरोध भयो। क्रोधित उज़्बेक कलिता अनाज्ञाकारी दण्ड निर्देशन दिनुभयो। Tverskaya भूमि बर्बाद गरेको थियो। इवान Danilovich व्लादिमीर पुनःप्राप्त र तब देखि, मास्को को अगुवाहरू, धेरै छोटो अन्तरालहरू लागि बाहेक, उत्तर-पूर्वी रूस को औपचारिक राजधानी को हात बाट छुटेका छैन।
इवान कलिता, 1340 सम्म शासन गरे जो पनि (बरु, किनेको वा,) आफ्नो शक्ति थपियो त्यस्तो Uglich, Galich र Beloozero महत्त्वपूर्ण छिमेकी शहर। उहाँले यी सबै अधिग्रहण लागि पैसा थियो? गिरोह सबै रूस देखि मास्को आधिकारिक कर उठाउनेहरू को राजकुमार गरे। कलिता विशाल वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण भएको थियो। बुद्धिमानीपूर्वक र विवेकपुर्वक को खजाना प्रबन्ध, उहाँले मास्को, संकलित पैसा को एक महत्वपूर्ण भाग मा बसे जसमा एक प्रणाली निर्माण गर्न सक्षम थियो। आफ्नो राजकूमारद्घारा शासित राज्य प्रणालीबद्ध छिमेकी क्षेत्रको वित्तीय राम्ररी हुनुमा ठंड को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध फलिफाप सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यो जो त्यहाँ मास्को वरिपरि मुलुकमा एक क्रमिक एकीकरण थियो अनुसार, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण causal जडान छ। तरवार कमर पर्स पासोमा परे। 1325 मा मास्को वरिपरि मुलुकमा को एकीकरण कारण जो अर्को महत्त्वपूर्ण घटना, यो शहर metropolitans सार्ने, थाले पूर्व आफ्नो निवास व्लादिमीर छलफल।
- र इवान (1353 - 1359) शिमोन (1353 1341): इवान कलिता एक आफ्नो दुई छोरा द्वारा शासन अन्य पछि पछि। महान् Duchy को लगभग बीस वर्ष Duchy Novosilsky (Zabereg) र केही ठाउँमा र्याजान (Vereya, खाल्टाखुल्टी, Borovsk) को एक भाग मिलयो ल्याइयो। शिमोन पाँच पटक गिरोह गए, bow गर्न र Tatars खुसी पार्न प्रयास गर्नुभयो, तर यसलाई घर मा व्यवहार गर्न imperative छ। यो समकालीनहरूको समयमा (उसलाई र इतिहासकारहरूले र पछि) गर्व यसलाई भनिन्छ। जब पूर्वोत्तर रूस शिमोन Ivanovich अन्य साना अगुवाहरू यसको "podruchnik" थाले। मुख्य विरोधी, Tver, सावधान थियो र मास्को को सर्वोच्चता चुनौती थिएन।
को गिरोह शिमोन राम्रो सम्बन्ध गर्न धन्यवाद, nomads रस raids बाधा थिएन। तर, त्यही समयमा सबै बिना अपवाद प्रधानहरू अर्को आक्रमण मार्फत जाने थियो। यसलाई जो एकै समयमा र पुरानो विश्व मा चर्किरहेको थियो "काला मृत्यु", एक घातक महामारी भएको छ। अल्सर नोभगोरोड, परंपरागत पश्चिमी व्यापारीहरू धेरै थियो जो मार्फत रूस आए। भयानक रोग परिचित जीवन गरिएका, सबै मास्को वरिपरि मुलुकमा को एकीकरण सहित सकारात्मक सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रिया रोकियो। यो तातार-Mongol आक्रमण भन्दा झन् खराब थियो भनेर बुझ्न पर्याप्त समस्या को मात्रा संग एक संक्षिप्त जानकारी। शहर आधा द्वारा मरिरहेका थिए, धेरै गाउँमा अन्तिम घर सम्म वीरान थिए। उहाँले विपत्ति को मृत्यु, र शिमोन र तिनका छोराहरूलाई। सिंहासन भाइ द्वारा सफल भएको थियो किन कि छ।
इवान, जसको शासन एकदम बेरंग थियो, केवल जसको लागि उहाँले उपनाम थियो लाल यसको सौन्दर्य लागि रूसी इतिहासको सम्झना। यो अवधि मात्र हाइलाइट खान मास्को राज्यपाल एक उपहार अन्य अगुवाहरू न्याय गर्ने अधिकार छलफल गर्न सकिन्छ। को पाठ्यक्रम, नयाँ प्रक्रिया मात्र देशमा मास्को वरिपरि समेकन त्वरित छ। इवान को शासन रूपमा द्रुत उमेर 31 वर्ष मा आफ्नो असामयिक मृत्यु सकियो।
दुई मास्को समर्थन
इवान लाल को हकदार आफ्ना जवान छोरा Dmitri, Kulikovo क्षेत्र मा तातार-Mongol सेना भविष्य विजेता थियो र आफ्नो नाम immortalized। तथापि, राजकुमार आफ्नो नाममात्र शासनकालको पहिलो वर्ष धेरै बाल्यकाल मा थियो। यो त स्वतन्त्रता प्राप्त वा व्लादिमीर मा एक शर्टकट प्राप्त गर्न मौका स्वागत गर्ने अन्य Rurik, फाइदा लिन खोजे। दिमित्री konstantinovich Suzdal उत्तरार्द्ध कम्पनी मा सफल भयो। इवान लाल को मृत्यु पछि, त्यो कहाँ व्लादिमीर मा शासन गर्न एक सर्टकट प्राप्त गरे सराय, को खान गरेको राजधानी गए।
मास्को छोटकरीमा रूस को औपचारिक राजधानी गुमाए। तर, स्थिति परिस्थिति प्रवृत्ति उल्ट्याउन सकेको छैन। रूसी मुलुकमा पृष्ठभूमि एकीकरण सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक: मास्को वरिपरि विभिन्न थिए। को राजकूमारद्घारा शासित राज्य हुर्किसकेका र एक प्रमुख शक्ति भएको छ जब, आफ्नो शासक राज्य टुक्रा गर्न गिर गर्न अनुमति छैन, दुई महत्त्वपूर्ण समर्थन प्राप्त गरेका छन्। यी स्तम्भहरु को aristocrats र चर्च थिए।
धनी र कलिता मास्को मा सुरक्षित सबै नयाँ boyars को सेवा गर्न आकर्षित भएको छ। भव्य duchy आफ्नो नतिजा प्रक्रिया क्रमिक, तर incessant थियो। फलस्वरूप, एक सानो को सिंहासन तुरुन्तै गठन boyar परिषद, प्रभावकारी र उपयोगी समाधान लिन पर्छ जो उहाँको वरिपरि दिमित्री देखा गर्दा, तपाईं हार्ड-प्राप्त स्थिरता बचत गर्न अनुमति दिन्छ।
Aristocrat अर्थोडक्स चर्च सहायता। भूमि मास्को वरिपरि समेकन को कारण शहर metropolitans समर्थन छ। 1354-1378 GG मा। यो Alexy (सांसारिक Elevfery Byakont) थियो। समयमा बाल्यकाल दिमित्री Donskoy, महानगरीय र मास्को राजकूमारद्घारा शासित राज्य मा कार्यकारी शक्ति को डी facto टाउको थियो। यो ऊर्जावान मानिस Kremlin को निर्माण सुरु। एलेक्स पनि गिरोह संग संघर्ष हल।
प्रेरित दिमित्री Donskoy
भूमि मास्को वरिपरि समेकन सबै चरणमा केही गुण नजिकै। पहिलो मा, राजकुमार छैन धेरै intriganskimi विधिहरू रूपमा राजनीतिक कार्य भएको थियो। यो यस आंशिक इवान कलिता थियो, यूरी थियो। तर तिनीहरूले मास्को हितमा लागि नींव राख्नु गर्न सके थियो। 1367 मा यो आफ्नो predecessors गर्न जवान दिमित्री Donskoy, जो धन्यवाद को वास्तविक शासन गर्न थाल्दा सबै एकीकृत रूसी राज्य तरवार र कूटनीति निर्माण गर्न स्रोतहरू थियो।
Muscovy कि अवधिमा बढ्दै गएपछि? 1360 मा उहाँले 1363 मा, संलग्न थियो Dmitrov - Rzhev - को Klyazma र Starodub (पहिले नै पक्के), व्लादिमीर, 1368 मा। तर, त्यसपछि रूसी इतिहासको प्रमुख घटना मास्को प्रधानहरू गर्न गैर-पालन, तर Mongol-तातार जुवा विरुद्ध खुला संघर्ष को शुरुवात थियो। शक्ति र यसको लाभ को Centralization यस्तो eventuality नेतृत्व गर्न सकेन।
मास्को वरिपरि पृष्ठभूमि भूमि समेकन एकल अवस्थामा बाँच्ने राष्ट्रको प्राकृतिक इच्छा कम्तीमा निष्कर्षमा थिए। यी आकांक्षाओं (विशेष गरी साधारण मान्छे) को feudal अर्डर सामना गर्नुपरेको थियो। तथापि, कहीं देर मध्य युग हो र अन्त आए। केही अग्रिम संग feudal सिस्टम को अपघटन को समान प्रक्रियाहरू duchies र काउंटियहरुलाई एक अधिकता आफ्नो राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्न कहाँ पश्चिमी युरोप, मा स्थान लियो।
अब मास्को वरिपरि रूसी मुलुकमा को एकीकरण प्रक्रिया अपरिवर्तनीय भएको छ कि, नयाँ समस्या खडा: को गिरोह को जुवा के के? आर्थिक विकास मा एक ब्रेक गर्न आदर र राष्ट्रिय मर्यादा तल प्ले। निस्सन्देह, दिमित्री Ivanovich, आफ्नो predecessors थुप्रै जस्तै आफ्नो मातृभूमि को पूर्ण स्वतन्त्रता को सपना देख्यो। पूर्ण शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले यो योजना निस्कँदा।
Kulikov युद्ध पछि
मास्को वरिपरि मुलुकमा को एकीकरण को लामो प्रक्रिया तातार-Mongol जुवा देखि रूस को मुक्ति बिना पूरा हुन सकेन। डन यो कुरा बुझेका र यो कार्य गर्न समय थियो निर्णय गरे। यो द्वन्द्व मध्य 1370 का बाहिर भङ्ग। मास्को को राजकुमार तिर्न आदर Baskakov इन्कार गरे। Zolotaya Orda सशस्त्र। लाग्यौं नास्तिक सेना Temnik Mamay उभिए। म समतल र दिमित्री Donskoy भेला हुन्थे। उहाँले एकाइ को धेरै अगुवाहरू द्वारा मदत थियो। को Tatars संग युद्ध सबै-रूसी सम्बन्ध थियो। सेतो काग मात्र र्याजान राजकुमार देखा, तर एक सेना डन उहाँको मदत बिना सामना।
21 सेप्टेम्बर, 1380 त्यहाँ Kulikovo क्षेत्र, देशको इतिहास भर प्रमुख मार्शल घटनाहरू मध्ये एक भएको छ जो एक युद्धमा थियो। Tatars पराजित गरेका थिए। दुई वर्षपछि एक गिरोह फिर्ता, र मास्को जलाए। तैपनि, स्वतन्त्रता लागि खुला संघर्ष सुरु भयो। यसलाई ठीक 100 वर्ष जारी राखे।
डन 1389 मा मृत्यु भयो। आफ्नो शासनकालको अन्तिम चरण मा, उहाँले Meshchersky को महान् Duchy Medyn र Ustyuzhna बढत साथ दिए। 1425 साल - 1389 बाट शासन गर्ने दिमित्री तुलसी म, छोरा। उहाँले Nizhny Novgorod राजकूमारद्घारा शासित राज्य को अवशोषण पूरा भयो। पनि मास्को वरिपरि मास्को मुलुकमा आफ्नो सम्बद्धता समयमा खरिद खान गरेको लेबल मार्फत मूर र Tarusa को वाहेक द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो। सैन्य शक्ति को राजकुमार भोलोग्डा को नोभगोरोड गणतन्त्र deprived छ। Rostov मास्को देखि एक सम्पत्तिको रूपमा 1397 मा Ustyug पायो। उत्तरतिरका विस्तार Torzhok र Bezhetsk कुएनाभाका को वाहेक जारी राखे।
पतन को कगार मा
तुलसी द्वितीय (1425 - 1462) जब Muscovy यसको इतिहास मा सबै भन्दा ठूलो गृहयुद्ध बाँचे। अधिकार आफ्नै मामा यूरी Dmitrievich, सरकार छोरा बुबा बाट पारित कि हुँदैन, अनि को लामो-गणनामा सिद्धान्त अनुसार विश्वास को वैध हकदार encroached "जेठोपन को सही द्वारा।" गृहयुद्ध निकै मास्को वरिपरि रूसी मुलुकमा को एकीकरण धीमा। यूरी को संक्षिप्त शासनकालको आफ्नो मृत्यु संग समाप्त भयो। : त्यसपछि लडाई मृतक छोराहरू सामेल Dmitri Shemyaka र तुलसी Diagon।
युद्ध विशेष ferocity भिन्नता थियो। म तुलसी द्वितीय द्वारा blinded थियो, र पछि उहाँले Shemyaka विष आदेश दिए। कारण मास्को वरिपरि रूसी मुलुकमा को एकीकरण को अघिल्लो चरणमा को परिणाम रूपमा रक्तपात को परिणाम, OBLIVION मा डुब्नु हुनेछ। तथापि, 1453 मा Vasily द्वितीय गाढा conclusively आफ्नो विरोधीको सबै पराजित। यो पनि आफ्नै अन्धो हस्तक्षेप गर्दैन सम्पादन गर्नुहोस्। हालैका वर्षहरूमा मा, मास्को राजकूमारद्घारा शासित राज्य आफ्नो शक्ति Vychegodskaya पर्म, भोलोग्डा र केही Romanov ठाउँ सामेल थियो।
नोभगोरोड र Tver अभिवृद्धि
को मास्को अगुवाहरू को reunification लागि सबै को सबै भन्दा तुलसी द्वितीय, इवान III (1462-1505) को छोरा गरे। धेरै इतिहासकारहरूले उहाँलाई पहिलो सबै-रूसी शासक विचार गर्नुहोस्। इवान शक्ति आउँदा, यसको सबै भन्दा ठूलो छिमेकीलाई नोभगोरोड गणतन्त्र थियो। लामो समय को लागि त्यहाँका बासिन्दाहरूले को मास्को अगुवाहरू समर्थित। तर, XV शताब्दीमा भव्य सर्कल नोभगोरोड को दोस्रो आधा महान् ड्यूक गर्न मुख्य तोड छलफल भएको थियो जो लिथुआनिया, गर्न सारे। र यो राय छैन groundless थियो।
लिथुआनिया को महान् Duchy आधुनिक बेलारुस र युक्रेन इलाका नजिकै। यो अवस्थामा कीव, Polotsk, Vitebsk, स्मोलेन्स्क र अन्य प्रमुख रूसी शहर belonged। इवान III नोभगोरोड र लिथुआनिया को संघ मा खतरा sensed गर्दा गणतन्त्र मा युद्ध घोषणा गरे। 1478 मा, द्वन्द्व बसे गरिएको छ। नोभगोरोड भूमि सम्पूर्ण मास्को राज्य साथ दिए।
त्यसपछि Tver राजकूमारद्घारा शासित राज्य को पालो आयो। जब यो मास्को संग बराबर सर्तहरू मा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् पटक, लामो गएका छन्। Tver मिखाइल Borisovich अन्तिम राजकुमार, साथै नोभगोरोड को मान्छे, लिथुआनिया एउटा सम्बन्ध गठन गर्ने प्रयास, त्यसपछि इवान III आफ्नो शक्ति खोसिएर नाङ्गै र आफ्नो शक्ति गर्न Tver साथ दिए। यो 1485 मा भयो।
मास्को वरिपरि रूसी मुलुकमा को एकीकरण लागि कारण यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, रूस बल्ल Mongol-तातार जुवा को फ्याँकिन् भन्ने तथ्यलाई मा निहित। 1480 मा हान Ahmat पेश र उहाँलाई आदर भुक्तानी गर्न मास्को अन्तिम राजकुमार प्राप्त गर्न खोजे। युद्ध को पूर्ण हुन भएन। मास्को र तातार सेना को विपरीत बैंकहरू उभिएर नदी Ugra, तर युद्धमा भोगेका छैन। Achmat गएको थियो, र चाँडै Zolotaya Orda धेरै ulus मा अप भङ्ग।
को नोभगोरोड र Tver साथै इवान III Yaroslavl, Vaga, Vyatka र पर्म भूमि, Vyazma र Ugra को महान् Duchy गर्न मिलयो। 1503 GG - रूसी-लिथुआनियाली युद्ध 1500 पछि। मास्को ब्रियान्स्क, Toropets, Pochep, Starodub, Chernigov, नोभगोरोड-Seversky र Putivl सारियो।
आफ्नो छोरा, Vasily III द्वारा सिंहासनमा इवान III को उत्तराधिकारी (1505-1533 GG।)। जब यो भूमि मास्को वरिपरि समेकन को पूरा भयो। तुलसी आफ्नो बुबाको काम, पहिलो कुरा तिनको शक्ति पेस्कोभ को एक भाग गरे छोडेनन्। को XIV शताब्दीको अन्त देखि यो गणतन्त्र मास्को को एक जागीरदार अवस्थामा थियो। 1510 मा, Vasily यसको स्वतन्त्रता खोसिएर नाङ्गै।
यो विशिष्ट रूसी राजकूमारद्घारा शासित राज्य को अन्तिम पालो पछि थियो। र्याजान लामो मास्को को एक स्वतन्त्र दक्षिणी छिमेकी भएको छ। 1402 मा, राज्यहरू बीच कि XV शताब्दीको बीचमा छ एक सम्बन्ध vassalage तरिका दिनुभयो थियो। 1521 मा, र्याजान सम्पत्ति भयो महान् ड्यूक। इवान III रूपमा, Vasily III धेरै देशी रूसी शहर स्वामित्व जो लिथुआनिया बारेमा बिर्सनु भएन। कि देश राजकुमार दुई युद्ध को परिणाम स्वरूप आफ्नो शक्ति स्मोलेन्स्क, Velizh, Roslavl र कुर्स्क थपियो।
को xvi शताब्दीमा मास्को को पहिलो तेस्रो अन्त गरेर सबै रूसी भूमि "भेला", र यसरी एक राष्ट्र-राज्य गठन। यो वास्तवमा को Byzantine मोडेल को राजा को शीर्षक लिन Ivanu Groznomu Vasily III को छोरा दिनुभयो। 1547 मा, त्यो मास्को को बस एक ठूलो राजकुमार र रूसी Tsar थियो।
जसले पहिलो पटक लागि माइक्रोस्कोप आविष्कार
क्राइमन Tatars: 1944 मा भएको घटना बारे प्रश्न
गणना Panin Nikita Ivanovich: जीवनी, क्रियाकलाप र रोचक तथ्य
"Instagrame" मा रूपमा आफ्नो फोन वा कम्प्युटरमा एक कहानी थप्न?
आवास कार्यालय - यो के हो? पूर्वाधार
घरमा दबाब हुन सक्छ कम ...
उपचार, रोकथाम र cervicitis को कारण
Geri Makkinnon: जीवनी र ब्रिटिश ह्याकर को फोटो
शैलाक के हो? तपाईंको सही मैनीक्योर!
चिकन को लागि garnish के पेश गर्न सकिन्छ?